GameMaker Studio 2: gadziriso yakaburitswa nenhau | Linux Vakapindwa muropa
MutambiMaker Studio 2 ine nyowani nyowani yakaburitswa kuunza inozove yazvino Beta vhezheni yemusoro wedhairekitori yeUbuntu Linux (ehe, ichi chete distro, sevakagadziri vanga vakaomarara pane izvi, uye vachingopa rutsigiro rwayo). Iyo inonakidza kwazvo software uye yakagadzirwa nemugadziri YoYo Mitambo.
Zvisinei, zvinogona kunge zvakadaro YoYo Mitambo inogona kuunza rutsigiro rwezvakawanda zvekugovera mune ramangwana. Iva zvazvingaite, panguva iyo iwe yaunogona kutonakidzwa nekubuditswa kutsva kwe GameMaker Studio 2 muUbuntu, nekudaro uchiwana inoshamisa mupepeti uye IDE ne SDL2 tekinoroji yekuteerera mhedzisiro uye zvinobuda. Iye zvino inozoshandisa zvakare FNA3D kugadzirisa zvese, izvo zvinobvumidza kuita mitambo iri nani yepamuchinjikwa-chikuva.
Ndinovimba vagadziri vako vanogona kugadzirisa zvimwe kutsamira yazvino GameMaker Studio 2 maraibhurari kuti asade mamwe maUbuntu-akananga raibhurari yemitambo inotumirwa kunze. Pamusoro peizvozvo, isu tiri kushanda zvakare kupurinda mamwe matambudziko nezvikanganiso zvinogona kuitika mune ino Beta vhezheni, kuitira kuti ramangwana shanduro dzakagadziriswa dziuye.
Kana iwe usati uchiziva chii chinonzi GameMaker Studio, ipuratifomu yakavakirwa pamutauro wakadudzirwa uye SDK yekuvandudza yako wega mitambo yemavhidhiyo. Yakatanga kugadzirwa naMark Overmars vachishandisa Delphi, vachinongedzera iyi software kune vashandisi veavovice vane zvishoma zvirongwa zvehurongwa. Naizvozvo, kuti ugadzire mitambo yemavhidhiyo haufanire kudzidza Java, C ++, kana mimwe mitauro yakafanana. Uye kana iwe uri mushandisi wepamberi, unogona kushandisa mamwe magwaro kugadzira mazita ako.
GameMaker Studio inokutendera iwe kuti ugadzire zvakapusa, zvichibva pane graphic zviwanikwa, kurira, mifananidzo, nezvimwe, izvo zvinozopihwa zvinhu zvinoitirwa mutambo wevhidhiyo, pamwe nezviitiko zvekutsanangura chiito chinoitwa kana kiyi yakadzvanywa, mbeva inofambiswa, nezvimwe.
Mamwe ruzivo nezve GameMaker Studio - Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GameMaker Studio 2: gadziriso yakaburitswa nezvitsva maficha